We Fight We Win. -- " More than Media ": နေ့လည် ကြောင်တောင် လက်ရဲဇက်ရဲ ဓါးပြတိုက်ခြင်း
နေ့လည် ကြောင်တောင် လက်ရဲဇက်ရဲ ဓါးပြတိုက်ခြင်း
ယု ဇ န ပလာဇာ ရှစ်ထပ် တွင် နေ့ လည်ကြောင်တောင် ဓါးပြ ၀င်တိုက်မှုဖြစ်ပွားသွားပါသည်။ ယခုအခါ ဗုံးကွဲလိုက် ဓါးပြတိုက်လိုက်ဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် မှာ တည်ငြိမ်းခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်းလုံးဝမရှိတော့ပါ။ ပြည်သူအများစုမှာ အထိတ့် တလှန်ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒါဟာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွေ
နဲ့ မိသားစုရဲ့အကျင့်ပျက်ကိုယ်ကျိုးရှာမှုများရဲ့ ဆိုးကျိုးရလဒ်များကို ပြည်သူတို့ ခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေမှုများကို လစ်လျုရှု ပြီး ဦးသန်းရွေ ၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နှင့်သားသမီးများ ကိုသာ
သစ္စာရှိနေတဲ့ မြန်မာတပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ဗိုလ်မှုးများ၊ စစ်သားများ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မိမိတို့ အထူးအံသြမိပါတယ်။ ယောက်ကျားမှ ဟုတ်ရဲ့ လား လို့သံသယဖြစ်မိပါတယ်။
the last artical was wrong place
yuzana plaza was near mingalar zay.
at the myay ne gon was dagon plaza